ကုရ်အာန်ကျမ်း သည် အလ္လာအရှင်မြတ်က တမန်တော် မိုဟာမက် ကို ပို့ချသော ကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ) သန်းကျော် အရေအတွက် ရှိသော မွတ်စလင်တို့ အတွက် တစ်ခုတည်းသော၊အထွတ်အမြတ်ထားရာ ကျမ်း ဖြစ်သည်။ ကုရ်အာန်ကျမ်းမှာ အာရဗီ ဘာသာဖြင့် ရေးသားထား၍ ခရစ်ယာန် ဓမ္မသစ် ...
စူရာ ကေယာမသ် သည် ကုရ်အာန်၏ ၇၅ ခုမြောက် စူရာ ဖြစ်သည်။ အာယသ်တော်ပေါင်း ၄၀ ရှိပြီး မကာမြို့တွင် ကျရောက်သော စူရာဖြစ်သည်။ ကေယာမသ်နေ့ကို မအားဒ် ဟုလည်း ခေါ်ဆိုသည်။ ဦးစွာပထမ ကေယာမသ် ဆိုက်ရောက်လာမည့်အကြောင်းကို ဖော်ပြပြီး ကယာမသ်၏ အတိတ်လက္ခဏာပုံစံများကို တ ...
အစ္စလာမ် ၏သွန်သင်မှုတွင် ကုရ်အာန် နှင့် အေမာမ်မာအ်စူမ် များ၏မိန့်ကြားချက်များအရ ဂွန်နာဟာနေကဗီရာ ကျုးလွန်သူများကို ဂျဟန္နမ် သို့သာသွားရမည့်အကြောင်းတင်ပြထားသည်။ မည်သည့် အပြစ်ဒုစရိုက်များသည် ဂွန်နာဟေကဗီရာ ဖြစ်သည်နှင့်ပတ်သက်၍ မဇ်ဟဘ် များအကြား ကွဲပြား ...
ခွမ်စ် ဆိုသည်မှာ အရဗီ ဝေါဟာရဖြစ်ပြီး ငါးပုံတစ်ပုံ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အစ္စလာမ် သာသနာဆိုင်ရာ ပေးဆောင်ရသည့် အခွန်အခများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အွမ်မသ်သေအစ္စလာမ်၏ ငွေကြေးအခက်အခဲများပြေလည်စေရန်နှင့် တရားမျှတစွာခွဲဝေပေးရေး၊ အစ္စလာမ့်အုပ်ချုပ်ရေး၏ ငွေကြေးကဏ္ဍ ...
အစ္စလာမ်မတိုင်ခင်အရင် စလ်မန်ဖာရစီ ၏ အမည်မှာ ရူးဇ်ဗေဟ် ဖြစ်သည်။ ‎တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ်၏ ဆွဟာဘာသာဝကကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ်သည် ‎စလ်မန်ဖာရစီကို မိမိ၏ အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားမှ ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့လေသည်။ ‎ထိုကြောင့် စန်မန်မိုဟမ္မဒီဟု ကျော် ...
ဆွန်နီမူဆလင် သည် အစ္စလာမ် ဘာသာခွဲများတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဆွန်နီ ဆိုသော စကားလုံးမှာ ဆွန်န ဆိုသော စကားမှလာပြီး မိုဟာမက်၏ စကားနှင့် အပြုအမူဟု အဓိပ္ပာယ် ရသည်။ ပရောဖက်မိုဟာမက် မရှိတော့သည်နောက် သူ၏အရိုက်အရာအားဆက်ခံမည့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အား မူဆလင်မျ ...
ဇိုင်နဘ်ဘေကွဘ်ရာသခင်မကြီး သည် အလီအိဘ်နေအဘီသွာလိဘ်နှင့်ဖှာသေမာသခင်မကြီးတို့၏ သားသမီးများအတွင်းမှ တတိယမြောက်ဖြစ်လေသည်။သခင်မကြီးသည် ရှီအာတို့၏ အလွန်မှပင် အလေးပေးအထွဋ်အမြတ်ထားခံရသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရှီအာတို့သည် ထိုသခင်မအား ဟဇ်ရသ်-သေ-ဇိုင်နဘ်ဟု တမ်းတခေါ် ...
တမန်တော်တို့သည် မဟာလူသားများ ဖြစ်သည့်အလျှောက် ဘုရားသခင်ထံမှ ၀ဟီ ‎ဗျာဒိတ်တော်များကို လက်ခံရယူထားသူများဖြစ်သောကြောင့် မွတ်စ္စလင်မ်တို့သည် ‎လေးစားဂုဏ်ပြုကြလေသည်။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် တစ်ခြားသောသာသနာ့ကျမ်းများတွင် ‎ထိုတမန်တော်တို့အား နဗီ ရစူလ် ...
ဟစ်ဂျ်ရီ သက္ကရာဇ် ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဇုလ်ဟစ်ဂျ်ဂျယ်လ ၁ဝ ရက်၊ ခရစ် ၆၃၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် တမန်တော် မို့ဟမ္မဒ် သခင်သည် ရောက်ရှိနေလေသည်။ ထိုမြို့တွင် ရောက်ရှိနေသော ၁၄ဝ ဝဝဝ ခန့် လူထုကြီးအား တမန်တော်မြတ်သည် ကုလားအုတ်ကို စီး၍ အလွန်လေးနက် မှတ်သားဖွယ်ကောင ...
ခါသမွလ်အန်ဗီယာ ခါသမွန်နဗီယီးန် ခါသမွရ်ရစူလ် ဆိုသည့်ဘွဲ့တော်ဂုဏ်တော်တို့သည်အစ္စလာမ့် တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် ကိုယ်တော်မြတ်၏ ဘွဲ့တော်များဖြစ်သည်။ ၎င်းအသုံးအနှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စူရာ အဲဟ်ဇာဘ် အာယသ် ၄၀ "ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول ال ...
မူဆလင် ကမ္ဘာ ဆိုသည်မှာ အစ္စလာမ် သာသနာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သော လူအများစုနေထိုင်သည့် အရပ်ဒေသ များကို ခေါ်ဝေါ်သည့် အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ် သာသနာကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူများသည် မိုဟမ္မဒိဗ်နေအဗ်ဒွလ္လာ အစ္စလာမ့် တမန်တော်မြတ်ကြီး ၏နောက်လိုက်များဖြစ်ကြပြီ ...
မွတ်စ်လင်မ် အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ က အစ္စလာမ်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များကိုသာမက ဘာသာရေးအရပတ်သက်မှုမဟုတ်သော ယျေဘုယျအတွေးအခေါ်များနှင့် အစ္စလာမ့်သဘာဝကို စေ့စပ်သော အတွေးအခေါ်များကိုပါတွေးခေါ်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ မိုဟမ်မက်၏နောက်လိုက်များရဲ့ပြောစကားတွေမှာလည်း အ ...
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် အများဆုံး အခြေချနေထိုင်ကြပြီး၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရိုဟင်ဂျာများကို ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံသားများ မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုကြကာ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေသည့် လူမျိုးတစ်စုဖ ...
ရှီယာ မူဆလင် သည် အစ္စလာမ် ဘာသာခွဲများတွင် ဆွန်နီ မူဆလင် ပြီးနောက် ဒုတိယ အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ရှီယာ မူဆလင်သည် မူဆလင်တွင် အရေအတွက် အားဖြင့်နည်းသော်လည်း အီရန်၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဘာရိန်း နှင့် အီရတ် တို့တွင် အဓိက ဘာသာ ဖြစ်ပြီး၊ လက်ဘနွန် နှင့် ကူဝိတ် တို့တွင ...
သဂျ်ဝီးဒ် ဆိုသည်မှာ အဘိဓာန်တွင်ပြီးပြည့်စုံခြင်း၊ ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့် အသုံးအနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ကုရ်အာန်ကို မှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာ ဖတ်ရွတ်ခြင်းဟု ဆိုရပေမည်။ သဂျ်ဝီးဒ် ပညာရပ်တွင် အက္ခရာများကို ...
သပ်က်လီးဒ် ဆိုသည်မှာ နောက်လိုက်ခြင်း နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်၏ ရှရီအသ်တရားတော်တွင် မဲရ်ဂျာအေသပ်က်လီးဒ် မှထုတ်ပြန်သော သာသနာ့ဆိုင်ရာပညတ်ချက်များအား လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းကို ခေါ်သည်။ သပ်က်လီးဒ် နှင့်ပတ်သက်၍ အိုဆူလေဒီးန်တွင် ဂျာယိဇ် မဟုတ်ပါ။ မိမိ ...
အစ္စလာမ့်အခွန် ဟူသည် အစ္စလာမ့်ဥပဒေအရ ပေးဆောင်ရသော အခွန်အခများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ "မြေခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအခြေအနေ"နှင့် "အခွန်ထမ်း၏ လူမှုရေးဘာသာရေးဆိုင်ရာအခြေအနေ" နှစ်မျိုးလုံးတွင်အခြေခံသည်။ အစ္စလာမ့်အခွန်များတွင် ပါဝင်သည်မှာ. ခရားဂျ် - အစတွင် မွစ္စလ ...
အစ္စလာမ့်ကျင့်ဝတ် ဟူသည် အစ္စလာမ်ဘောင်တွင်းမှ ကိုယ်ကျင့်တရား ဖြစ်ပါသည်။ အစ္စလာမ့်ကျင့်ဝတ်တွင် အဓိကအပိုင်းပိုင်းပါဝင်သည်။ သူတစ်ပါးနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု ….တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ လူအများဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း။ ဥပမာ− မိသားစု၊ အပေါင်းအသင်းများဖြင့် ပြုမူဆက်ဆ ...
အစ္စလာမ် ဆိုရှယ်လစ်စနစ် သည် အစ္စလာမ် ခေါင်းဆောင်များအကြား နမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုတည်းကို အဓိက ဖွင့်ဆိုခြင်းအပြင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် အမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုလည်း ရှိသည်။ မွတ်စလင်မ်များက ဆိုရှယ်လစ်ဇင်မ်ကို ကုရ်အာန် နှင့် တမန်တော်မြတ် ၏သွန်သင်လမ်းညွှန ...
အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် ဘုရားသခင် သည် ခွဲခြားမရနိုင်သည့် တစ်ဆူတည်းသော အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်ပြီး စကြဝဠာကို အုပ်စိုးသည့် အသိဉာဏ်ရှင်ဖြစ်ကာ စကြာဝဠာတွင်းရှိ အရာခပ်သိမ်းအားလုံး၏ ဖန်ဆင်းရှင် ဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် ဘုရားသခင်သည် တစ်ဆူတည်းသော အရှင်မြတ် ဖြစ်ပြီ ...
အပ်စမာအိုဟွတ်စနာ သို့မဟုတ်အရှင်မြတ်၏မွန်မြတ်သော နာမတော်များဆိုသည်မှာ အစ္စလာမ် သာသနာတွင် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်အတွက်ခေါ်ဆိုသည့် အမည်နာမတော်များကိုဆိုလိုသည်။ နာမတော်များ၏အရေအတွက် မှာ ၉၉ ခုဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့်ကုရ်အာန်၌ဖေါ်ပြထားသည်။ အချို့ကလည်းထိုအရေအ ...
ရှီအာ များသည် အစ္စလာမ် ၏အုတ်မြစ်များကို အိုဆူလေဒီးန် နှင့် ဖှရူအေဒီးန် နှစ်ခုပေါ်တွင်အခြေခံပြီးယုံ ကြည်ထားသည်။ အိုဆူလ် သည်ယုံကြည်ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးး ဖှရူအ် သည် ဝါဂျိဘ် ဆိုင်ရာကျင့်ဆောင်မှု များဖြစ်သည်။ အိုဆူလ် ကိုယုံကြည်ရမည်မှာ သာသနာကိုလက် ...
အဟ်မဒီယာမွတ်စ်လင်မ်အဖွဲ့သည် အစ္စလာမ်သာသနာကို မူရင်းအစစ်အမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေရန် ကောင်းကင်ဆိုင်ရာလမ်းညွန်မှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစ္စလာမ့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၈⁠၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ နိုင ...
အာယသ် ဆိုသည်မှာအဘိဓာန်တွင်အမှတ်အသားလက္ခဏာဟုဖေါ်ပြထားသည်။ အစ်္စသေလာဟ် ခေါ်အသုံးအ နှုန်းတွင် ကုရ်အာန်၏ မုက္ခပါဌ်တော်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုခေါ်ဆိုသည်။ ၎င်း အာယသ် တော်များကိုစာကြောင်းစာ ပုဒ်များအနေနှင့်စုစည်းထားပြီး စူရာ တစ်ပုဒ်အဖြစ်ရေးသားထားသည် ၊စူရာ တ ...
အိုဆူလေဒီးန် သည် သာသနာအားသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၏ အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ရှီအာ တို့၏ယုံကြည်ချက် တွင်ဦးစွာ၎င်းတို့အားယုံကြည်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထို့နောက် ဖှရူအေဒီးန် လက်တွေ့ကျင့်ကြံရမည်တို့ကိုဆောင် ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အိုဆူလေဒီးန် သည်ယုံကြည်မှုနှင့်သက်ဆိုင်ပြီး ဖှရူအေ ...
အေမာမ် ခေါ် သာသနာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ရှီအာမွတ်စ္စလင်မ်တို့၏ ‎အဓိကယုံကြည်ချက်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ရှီအာတို့ကို ရှီအာအက်စ်နာအက်ရှ်ရီယာ ဆိုလိုသည်မှာ ‎တစ်ဆယ်နှစ်ပါးအေမာမ်များကို ယုံကြည်နောက်လိုက်သူဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြလေသည်။ အ ...
၁၂ ပါး အေမာမ်ကို လက်ခံသော ရှီအာ သို့မဟုတ် အပ္စနာအရှ်ရီ ဆိုသည်မှာ အစ္စလာမ်သာသနာတွင် မဇ်ဟဘ်ဘေရှီအာ ၏ အမည်ဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ့် တမန်တော်မြတ်ကြီး ပြီးနောက် ဆက်ခံသည့် ၁၂ ပါး အေမာမ်အား လက်ခံယုံကြည်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဤသာသနာကို ရှီအာယေဂျာ့အ်ဖှရီ အေမာမီယာ ဟုလ ...
မွတ်စလင်မ်တို့သည် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စတင်ရာ၌ မင်္ဂလာရှိစေရန်အတွက် ‘အလွန်တစ်ရာ သနားကြင်နာတော်မူထသော၊ မဟာဂရုဏာတော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူထသော ဘုရားရှင်၏ နာမတော်ဖြင့် ’ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော Bismillaheer Rahmaneer Raheem ကို ရွတ်ဆိုလေ့ရှိကြပြီး မူရင်းမှ ...
အန်ဒရေ ရိုမီလီ ယန်း, လူပို၍အသိများသည်မှာ အနုပညာနာမည် Dr. Dre သည် အမေရိကန် ရပ်ဂီတ အဆိုတော် သီချင်းထုတ်လုပ်သူ စီးပွားရေးသမားဖြစ်သည်။Dre သည်နာမည်ကြီးရပ်အဆိုတော်အဖွဲ့ NWA ၏အဖွဲ့ဝင်‌ဟောင်းတစ်‌ယောက်လည်းဖြစ်သည်။သူသည် Aftermath Entertainment နှင့် Beats ...
Neil deGrasse Tyson သည် အမေရိကန်လူမျိုး နက္ခတ္တရူပဗေဒပညာရှင်၊ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ မန်ဟတ်တန်၊ နယူးယောက်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ရူပဗေဒပညာရပ်ဖြင့် ၁၉၈ဝ ခုနှစ်တွင် ဘွဲရခဲ့သည်။ တက္ကဆပ် တက္ကသိုလ်မှ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် နက္ခတ္တဗေဒပညာ ...
ကျူးဝီ ဟုလူသိများသော Chou Tzu-yu သည် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသား ကေပေါ့ပ် အဆိုတော် နှင့် မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယား အခြေစိုက် JYP အင်တာတိန်းမန့် လက်အောက်ရှိ မိန်းကလေးကေပေါ့ပ်အဆိုတော်အဖွဲ့ Twice ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ကင်ဂျုံအွန် သည် ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး ကိုရီးယား အလုပ်သမားပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ကင်ဂျုံအီ နှင့် ဇနီး ကိုယောင်ဟီး တို့၏ အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ပညာသွားရောက်သင်ယူခဲ့သည်။ ...
ကက်နက် ရေး ရော်ဂျာ သည် အမေရိကန် အဆိုတော်၊ တေးရေးသူ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ တေးထုတ်လုပ်သူ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃တွင် ကန်းထရီးဂီတ ဂုဏ်ပြုအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြတိုက် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရသည်။ ကန်းထရီးဂီတပရိတ်သတ်များကြားတွင် အအောင်မြ ...
ခရစ္စတိုဖာ မိုက်ကယ် ခရစ် ပရတ် သည် အမေရိကန် ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ် Everwood TV ဇာတ်လမ်းတွဲ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် Parks and Recreation ဇာတ်လမ်းတွဲမှ နေရာရလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထုတ် Wanted Moneyball ၊ The Five-Year Engagement ၊ Zero Dark Thirty ၊ ...
ချိုက်ယာ မိတခြိုက် အထီးအဆိုတော်ထိုင်း မှာမွေးဖွား ၅ ဧပြီလ ၁၉၇၄ ကဲ့သို့သောဂီတနှင့်အတူ။ "သူမသည်မှာစောင့်ဆိုင်းဒားငတာ်င" "ရေတွက်သွေ" "ထူးခြားသော"
မန်နူဝဲလ် ဖရန့်စစ်ကို ဒို့စ် ဆန်းတို့စ် သည် ဂါဟင်ရှာ အဖြစ်လူသိများ၍ အလယ်တန်း ညာစွယ်တွင် ကစားသော ဘရာဇီးဘောလုံးသမားဟောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးကျယ်ဆုံး ဘောလုံးသမားများအနက် တစ်ဦးအဖြစ် ယူဆကြကာ အကောင်းဆုံး လိမ်ခေါက်သူအဖြစ်လည်း အချို ...
ဂျက်ဆီကာ မီချယ် ချက်စတိန်း သည် အမေရိကန် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးနှင့် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ဆိုနိုမား ကယ်လ်ဖိုးနီးယားအနီး မြို့ငယ်လေး၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဆာကရမန်တိုတွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ချက်စတိန်းသည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ရုပ်ရှင်ပညာအား စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ၂၀ ...
ဂြင်းတရာ ဖွန်လာဖ တစ်ဦးကအမျိုးသမီးအဆိုတော်ထိုင်း မွေးဖွားခြင်းနေ့စွဲ: ၆ မတ်လ ၁၉၆၉ ၁၉၈၇ ကတည်းကစက်မှုလုပ်ငန်းဝင်နှင့်သူ၏အလုပ်ယနေ့အထိအဆိုတော်စောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ထားပါတယ်တဲ့အဆိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျိမ်းစ် ဝေါရန် ဝိုက် သည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အဆင့်မြင့် စနူကာကစားသမားဖြစ်သည်။ ယခု၌ ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲစဉ်ကဒ်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်လျှက်ရှိသည်။ နာမည်ပြောင် လေပွေ ကို ၎င်း၏ ညက်ညောသော၊ အတိုက်ပုံစံ ကစားမှုမှတစ်ဆင့်ရရှိခဲပြီး ပြည်သူ့အချစ်တော် ဟူ၍လည်း ရည်ညွှန်းက ...
ဂျင်းနီ သည်တောင်ကိုရီးယား မိန်းကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ပင့် ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမကို ၁၆ရက် ဇန္နဝါရီလ ၁၉၉၆ တွင် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဂျန်နီဖာ ရှရဒါ လောရန့်စ် သည် အမေရိကန် အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူမကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းကပင် လောရန့်စ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လစာဝင်ငွေအများဆုံး အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ ရိုက် ...
ဂျပ်ဒ် ထရမ့် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အဆင့်မြင့် စနူကာကစားသမားဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဆုအများဆုံးရရှိသူများစာရင်းတွင် မာ့ခ် ဆဲလ်ဘီနှင့်အတူ ဆုဖလား ခု ရရှိထားပြီး စာရင်း၏ သတ္တမနေရာတွင်ရှိသည်။ ထရမ့်သည် ၂၀၀၅၌ အဆင့်မြင့်စနူကာကစားသမားအဖြစ် အသက် ...
ဂျိမ်း ဩဂတ်စတင်း အလွိုင်းစစ် ဂျွိုက်စ် သည် အိုင်ယာလန် ဝတ္ထုတို စာရေးဆရာနှင့် ကဗျာဆရာ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀ ရာစု၏ ဩဇာအလွှမ်းမိုးဆုံး စာရေးဆရာတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ Ulysses ၁၉၂၂ သည် သူ၏ အကျော်ကြားဆုံးသော ဝတ္ထုရှည်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီး Finnegans Wake ၁၉၃၉ သ ...
ဂျို့စ် ဂေဗီယို ဗမ်းန် သည် ပြင်သစ်စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့အား ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်၊ ၁၈၂၈ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူ ပယ်ရီဗန်းမှာ နာမည်ကျော်ရှေ့နေကြီးတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၈၂၇ ခုနှစ်တွင် စကော့လူမျိုးအဆက်အနွယ်ဖြစ်သူ ဂျင်ဩဂတ်စတင် အယ်လိုတီ ခေါ် အမျ ...
ဂျော့ မိုက်ကယ် သည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအဆိုတော်၊ တေးရေးသူ၊ တေးသီချင်းထုတ်လပ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Wham! အဖွဲ့၏ အဆိုတော်တော် နှစ်ဦးအနက်တစ်ဦးဖြစ်ကာ ပရဟိတလုပ်ငန်များကို လုပ်ကိုင်သူလည်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း၌ တစ်ကိုယ်တော် သီဆိုသူအဖြစ်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ တေးအ ...
ဂျော့ဂျ် ဝေါ့လ်တန် လူးကပ်စ် ဂျူနီယာ သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ၊ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ စတားဝေါစ် ခေါ် ကြယ်တာရာ စစ်ပွဲများနှင့် အင်ဒီယာနာ ဂျုံးစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့်သ ...
အဲရစ် အာသာ ဘလဲ သည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဝတ္ထုရေးဆရာ၊ အက်ဆေးစာပေဆရာ၊ သတင်းထောက်နှင့် စာပေဝေဖန်သူ တစ်ဦးဖြစ်၍ ၎င်း၏ ကလောင်အမည် ဂျော့အော်ဝဲ အနေဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ အော်ဝဲကို ၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ မွေးဖွားသည်။ အီတန်၌ ပညာသင်သည်။ ၁၉၂၂ မှ ၁၉၈ ...
ဂျွန် ဝစ်စတန် အိုနို လင်နွန် သည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး တေးရေးနှင့်အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ် ရော့ခ်တီးဝိုင်း သည် ဘိတယ်လ်စ် တွင် ဂီတာတီးခတ်ရင်း သီချင်းလည်းသီဆိုကာ အောင်မြင်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ သည်ဘီတယ်လ်စ် တီဝိုင်း အနားယူခဲ့သည် ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းတွင် ...
ဂျွန် ဝီလျံ ပိုလီဒိုရီ တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် လူသိများပြီး သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစား ဖန်တီးသူအဖြစ် အချို့ကအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ သူ၏အောင်မြင်မှုအရှိဆုံး လက်ရာသည်" Vampyre” ဇာတ်လမ်းတိုဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးထုတ်ဝေသော ခေတ်သစ်သွေးစုပ် ...